नेपाल आज | यी हुन् धुमपानको लतबाट छुटकारा पाउने सामान्य घरेलु उपायहरु, एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुहोस !
यी हुन् धुमपानको लतबाट छुटकारा पाउने सामान्य घरेलु उपायहरु, एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुहोस !
आफुले चाहेको कुरा गर्न पाउनु कुनै पनि मानिसको आचरण हो। यिनै कुरालाई पुरा गर्ने चक्करमा कुनै बेला उनीहरु खराव मानिस अनि खराब लतमा फस्न पुग्छन त्यसै मध्येको एक हो धुमपान सेवन। कसैको लहैलहैमा लगेर होस् या बाध्यताबस कुनै पनि मानिस जब धुमपान चपेटामा पर्छ तब उसलाई यसको दलदलबाट छुटकारा पाउन निकै कठिन हुन्छ। तर आफ्नो सोचाईको कुरा हो कति असम्भव कुराहरुलाई यथार्थमा बदल्न सक्ने मानिसका लागि जाडरक्सिबाट लागेको लत छुटाउन गाह्रो नहोला। आज हामी धुम्रपानको लतबाट सजिलै बाहिर निस्कने केहि उपायका बारेमा बताउदै छौं जुन तपाईका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ आउनुहोस
दालचिनी र मह
धुमपान छोड्न कुनै पक्का निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ। किनकि तमाखुमा प्रयोग गरिएको निकोटिनको आदत परे परेपछि मानिसहरु स्वयं त्यसको गुलाम बन्न तयार हुन्छ। तर यदि धुमपानको खराब लत हटाउने सोचमा यदि तपाईहरु हुनुहुन्छ भने दालचिनी तपाईका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। चुरोट पिउने मन हुने बित्तिकै दालचिनीलाई पिसेर धुलो बनाई हल्का मनतातो पानीमा मिसाई खाने गर्नाले यसको लतबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ यसका साथै दालचिनीको धुलोलाई महमा पनि मिसाएर खान सकिन्छ।
अजवाईन र सुप
धूमपानको लत हटाउनका लागि अजवाईन र सुपको सेवन गर्नु पर्छ। यसको सेवनले सिगरेटको लत हटाउनुका साथै स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक रहेको छ। यसका लागि अजवाईन र सुपको धुलोमा अलिकति कालो नुन मिसाई पेस्ट बनाएर एक रातका लागि छोडिदिने र बिहान हल्का तातो बनाई सेवन गर्ने। तयार गरिएको पेस्टलाई चुरोटको लत लाग्ने बित्तिकै खान सकिन्छ।
अदुवा र अमला
जो व्यक्ति चुरोटको लतबाट टाढा रहनछ उसका लागि अदुवा र अमलाको सेवन गर्नु पनि फाइदाजनक नै रहेको छ। अदुवा र अमलालाई पिसी निबुवा र नुनको मिश्रणलाई हरेक दिन बिहान र बेलुका सेवन गर्नाले चुरोट लत सजिलै छुटाउन सकिन्छ।
सामान्य मानिसका लागि प्याजको रस खानु त्यति सजिलो काम होइन तर धुम्रपानको लत लागेका लागि प्याजको रस पिउन त्यति गाह्रो नहुन पनि सक्छ। चुरोटको लत छुटाउनका लागि हरेक दिन ३/४ ओटा प्याज औषधीको रुपमा सेवन गर्नाले फाइदा हुने देखिन्छ।
धुमपान छोड्ने केहि सरल तरिकाहरु
चुरोटको लत छुटाउने काम एकैदिनमा सम्भव हुदैन। यसको दलदलबाट हट्नका लागि बिस्तारै बिस्तारै मात्रा कम गर्दै लैजानु पर्छ। आवश्यकता हेरी अलि अलि गर्दै चुरोट संख्या घटाउदै लैजान सकिन्छ।
धूमपानको खराब आचरणबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईले मनि बक्सको प्रयोग पनि गर्न सक्नु हुनेछ। जब चुरोट खाने मन हुन्छ तब त्यसलाई खरिद गर्ने पैसा मनि बक्समा जम्म गरिदिनुहोस् जसले गर्दा धुवामा खेर जाने पैसाको बचत पनि हुन्छ र स्वास्थ्य पनि
इच्छाशक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने
जब तपाईलाई चुरोट पिउने मन हुन्छ तब एक गिलास पानी तुरुन्तै पिईहाल्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाइको मन डाईभर्ट त हुन्छ नै साथै मन शान्ति पनि हुन्छ। सुरु सुरुमा यो उपाय सफल नभएपनि यस प्रक्रियालाई केहि दिनसम्म जारी राख्न सकेको खण्डमा धुम्रपानको लतबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ।
यद्धपि धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।
डाक्टरलाई कसैले माया गर्दैन (भिडियोसहित)
जान्नुहोस्, दाँत ब्रश गर्ने सहि तरिका
यस्ता छन, शाहाकारी खाना खाँदा हुने फाइदा